Tønsberg [²tønsbær] (oo ku saabsan codka maqalka) waa magaalo iyo degmo oo ku taal gobolka Vestfold, koonfurta Norway, oo ku yaalla qiyaastii 102 kiiloomitir (63 miles) koonfur-koonfur galbeed ee Oslo oo ku taal xeebta galbeedka Oslofjord meel u dhow afkiisa Skagerrak. Xarunta maamulka ee degmada waa magaalada Tønsberg. Degmada waxeey lee dahay dad gaaraya 41,239 waxayna ka kooban tahay aag 107 kiiloomitir oo isku wareeg ah (41 mayl laba jibaaran).
Tønsberg guud ahaan waxa loo arkaa magaalada ugu da'da weyn Norway, oo ay aasaasay Vikings qarnigii 9aad.    Tønsberg waxaa loo asaasay degmada 1 January 1838 (fiiri formannskapsdistrikt). Degmada miyiga ee degmada magaaladu waxay ku biirtay degmada Tønsberg 1dii Janaayo 1988. Degmada deriska ee Re-ka waxaa lagu dari doonaa Tønsberg ama ka hor 1da Janaayo 2020. 
Waa gurigeeda Tønsberg Fortress on Castle Mountain, oo ay ku jiraan burburkii Castrum Tunsbergis, oo ah meesha ugu weyn ee Norway ee qarnigii 13aad. Bandhiga muusikada dibadda waxaa lagu qabtaa Tønsberg Fortress July kasta.   Tønsberg ayaa sidoo kale ah guriga Oseberg Mound, halkaas oo qarnigii 9aad ee Oseberg Ship la qoday.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Tønsberg&oldid=186200"